Electric môtô View More
Electric bisikileta View More
Amin'ny maha-karazana jiro pedaling vaovao scooter, UWITGO S5 nandray ny farany Cruise famolavolana hevitry ny teknolojia fanaraha-maso, izay be ampiasaina amin'ny fiara, toy izany koa ny mpampiasa dia afaka tena ratsy ny tany sy ny scooter ho tonga any an-toerana laharana hafainganam-pandeha. Ankoatra izany, dia vonona miaraka amin'ny fanaraha-maso ny fampiharana Cruise zava-baovao, izay mahatonga azy io marani-tsaina kokoa. Jereo kapoka endri-javatra bebe kokoa.
finday avo lenta Connectable
Dona hisakana ny fiasan'ireny Fa Fampiononana
Ultra-Fahazavana & Portable
View rehetra môtô
UWITGO S6 dia marika scooter herinaratra vaovao izay lasibatry ny miaritra mitaingina ambony mpampiasa. Zavatra tsy tafiditra amin'ny famolavolana ny hery avo fahafahana bateria, izay azo antoka tsoavaly lavidavitra afaka hahatratra hatramin'ny 70Km. Miorina amin'ny endrika ergonomic teorian'ny, reinvent ny famolavolana ny foldable seza kitapo, izay afaka halefako mpampiasa reraka ary hampitombo ny zava-nitranga ny mitaingina scooter. Jereo kapoka endri-javatra bebe kokoa.
patanty mbola hanohon
Amin'ny maha-modely notsorina, UWITGO A5 no maivana kokoa sy kely. Aluminium firaka na karbaona fibre vatana fitaovana azo nisafidy ny mpanjifa. Ny lanjan'ny aluminium firaka scooter no 7.5kg, ary ny tena lanjan'ny karbaona fibre ihany no 6.3kg. Mora ny vala, mora entina, ary tena mety ho an'ny nivezivezy fohy. Jereo kapoka endri-javatra bebe kokoa.
Aluminum firaka & Carbon Fibre
Ny UWITGO CF1 hanaraka ny manezioma firaka tahaka ny endriny, izay mazava amin'ny lanja sady matanjaka amin'ny hery, izany no mahatonga ny ankapobeny lanjan'ny bisikileta 30% lalina noho ny sisa amin'ny market.The bisikileta iray manontolo tsy misy welding, izay mahatonga ho etỳ ambonin'ny kokoa marefo. Hanaraka ny hiringiriny-manify brushless maotera, latsaky ny 5% angovo very, angovo kokoa mamonjy sy hampihenana ny harerahana mandritra ny tsoavaly.